Apụghị ịkwụsị texting gị hụrụ n'anya, nri? Nke ahụ bụ otú ndị mmadụ na-egosi ha ịhụnanya. Ndị mmadụ na-achọ mgbe nile ndị ha hụrụ n'anya maara otú ihe ha hụrụ n'anya ma na-atụ uche ha. Ọ bụrụ na ị na ike gwụrụ nke ochie ịhụnanya ozi, ị pụrụ amasị lelee ndị na-esonụ ohuru ịhụnanya ozi. 3 akụkụ na-kpuchie ke ibe a:
Part 1. Ozi nke Ịhụnanya
Part 2. Ịhụnanya Ozi maka ụbọchị ọmụmụ, enyi nwanyị, nwa na-enweghị enyi, nwunye, na di
Part 3. Olee naghachi furu efu Ịhụnanya Ozi si iPhone na gam akporo igwe
Ozi nke Ịhụnanya
N'anya Birthday Ozi & Ịhụnanya Ozi maka Girfriend, enyi nwoke, nwunye ya, na Di
SMS maka ụbọchị ọmụmụ
Hindi ịhụnanya SMS
SMS maka na enyi nwanyị
SMS maka di
Good Morning Ozi
Mara mma Ịhụnanya Ozi
Ozi maka enyi nwoke
N'anya Birthday Ozi
On a ụbọchị pụrụ iche nke ndụ gị, m chọrọ ịhụ gị na-achịkwa ọchị! Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ m, ịhụnanya m gị n'anya, eyìm!
E nweghị ugbu mma iji gosi gị otú ị m hụrụ unu n'anya, n'ihi ya, n'ihi na ụbọchị ọmụmụ gị m na-enye gị obi m.
N'ihi na m na, ọ dịghị ihe dị mma karịa na-ekere òkè na nke a ụbọchị pụrụ iche na ọkacha mmasị m onye: gị. Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ m, ịhụnanya!
Sweet! WTF ihe ụwa m aghọwo na gị! On a pụrụ iche ụbọchị, na-eziga gị niile m ịhụnanya na-na-achọ gị nwee obi ụtọ taa na mgbe niile. EZI NCHETA ỌMỤMỤ!
Otu ihe afọ-abịa na-arahụ, The omume nke oge na-trickling pụọ. Ụbọchị ọmụmụ gị na-echetara m ka ị mara m ekele maka gị ọ bụla ma kwa ụbọchị.
My ịhụnanya n'ihi na ị bụ ibu karịa na mbara igwe na miri karịa oké osimiri. Ọ bụ nke ụwa a & ọkacha mmasị m ihe na ụwa. Ezi ncheta ọmụmụ.
Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ na Ihọd onye mgbe afiak okpu nditọ a kwaa ma nwere ike ime ka obi m egwú a kwaa.
Ị ewetara ndị kacha mma na m. Ị mụnyere ụwa m. Ezi ncheta ọmụmụ.
Ị na-eme m ụbọchị ọṅụ, ị na-eme ịhụnanya m eziokwu, m nnọọ obi ụtọ ka ukwuu, ihe nile n'ihi unu. Ezi ncheta ọmụmụ.
Ị bụ onye pụrụ nnọọ iche nwoke na taa bụ ụbọchị ọmụmụ gị otú ahụ ka m ekele Chineke na ka ị zuru okè, obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ m ịhụnanya.
Ịhụnanya Ozi na Hindi
Saath agar doge muskrayenge zarur, Pyar agar dil se karoge ka nibhayenge zarur, Raah m kitne kante q na ho, Awaz agar dil se doge ka aayenge zarur ...
itana yakeen ka apne aap pe bhi nahi, jitna hai tere pyaar pe, har saans le raha Hoon, tere hausalon ke atebaar pe, mere dil ki aag boojhane Ek baar ka aa jaa, markar bhi jee jaonga, sadke tere pyaar pe ...
Tu hi Bata a dil tujhe samjhau kaise, Jise chahta hai tu iji nazdik Lau kaise, YU ka har tamanna har ehsas hai naa mera, Magar anyị ehsas ko unu ehsas dilau kaise ...
Har kisi k liye YU hum chọrọ nahi karte, Unu Ụsụ yahi pe hum imecha nahi karte, agar hmara IGBOB na EE ka unu ute sochna k hum apko uche nahi karte ... Na Na Na
Eziga 'Mili Bhi ka Sirf Khuda Ke Darbaar Mein', Aab Tum hi Batao .. Yaaron .. hum 'Ibaadat Karte Ya Mohabbat' .. !!
Dil Nahi Lagta Aap ko Dekhe Bina, Dil Nahi Lagta Aap ke Iferi Me Soche Bina, Aankhe Bhar Aati hai Yeh Soch kar, Kish Haal Me Hoge Aap Hamare Bina .. !!
Iji Baarish Pasand thi, Mujhe Baarish m eziga .. Iji Hasna Pasand tha, Mujhe Ngwa Ngwa hue eziga .. Iji Chup rehna Pasand tha, Mujhe Boltey hue eziga .. Iji Sab Kuch Pasand tha, Ma ọ bụ Mujhe Sirf eziga ..
Aankhon m rehne walo ko yaad nhi karte, Dil m rehne walo ki baat nhi karte, Hamari ka ruh m Bas gye h aap, Tabhi ka hum milne ki fariyad nhi karte.
Haal-e-dil Æ dilbar hum tujhe kaise kahen, Josiah dard hai dil m eji kaise sahen, Rone se Na tasveer kahin mit na jaye par, Jab dard hai dil m ka m ashk kaise na bahen.
Ịhụnanya Ozi maka na enyi nwanyị & Nwunye (ya)
M chọrọ ịgwa gị na ebe ọ bụla m, ihe ọ bụla na-eme, Aga m na-eche echiche nke gị, na oge anyị nọrọ ọnụ, dị ka m nwee obi ụtọ oge. M ga-eme ya nile ọzọ, ma ọ bụrụ na m nwere nhọrọ.
M maara nke abụọ m zutere ị na e nwere ihe banyere gị dị m mkpa. Amama ọ bụ ihe banyere gị mgbe niile. Ọ bụ nanị gị.
N'agbanyeghị ihe mere. N'agbanyeghị ihe ị na na mere. N'agbanyeghị ihe ị ga-eme. Aga m ahụgide gị n'anya. M ṅụọ iyi ya.
Ọ dịghị mkpa otú dị nnọọ ka anyị bụ ọnụ ugbu a. Unu na-na echiche m. M nwere ike na-eche na ịhụ gị ọnwa ole na ole site ugbu a. M hụrụ gị n'anya ezie na m kilomita iche.
Apụghị m n'ụzọ zuru ezu ikwupụta otú ekele m na-ị bụ enyi m nwanyị. Ị na-atọ ụtọ, smart na mara mma. Olee otú abịa i dara m? M nnọọ a dịghị onye ma unu hụrụ m n'anya maka m. A ijeri hugs na nsutu.
Abụ m tii akpa na ị bụ iko m nke mmiri ọkụ. A na-ede na ị na-ewetara ndị kasị mma na m. A hụrụ m gị n'anya.
Enwetụbeghị m a oge si obi abụọ. A hụrụ m gị n'anya. Ekwenyere m na gị kpamkpam. Unu bụ ndị m dearest otu, ihe mere m ji ndụ.
Apụghị ihi ụra, na maa ihe? ị na na na uche m! dị nnọọ na-achọ inwere na ị nọ ebe na ogwe aka m
Ọ dịghị mgbe m hụrụ unu n'anya ọ bụla ihe karịa m, nri nke abụọ a. Na Aga m mgbe gị n'anya ọ bụla ihe na-erughị m na-eme, nri nke abụọ a.
M na luckiest mmadụ n'ụwa ka ị dị ka m girl!
Ịhụnanya Ozi maka Di (ya)
M na-eche ihe ndị kasị mkpa mkpebi m mgbe were ná ndụ na, Ọfọn ọ na-ịlụ di na nwunye gị, n'ihi na ị bụ ndị kasị mma onye na ụwa, na ịhụnanya unu hubby!
Ị bụ otú umeala n'obi ma na-elekọta, na gị, ọ bụ oké nkekọrịta, The kasị mma ndụ ibe na m nwere ike ịjụ bụ gị, Daalụ maka ịbụ ndị kasị mma hubby, a pụrụ nnọọ iche na-ekele gị!
Oge ọ bụla m na-emechi anya m, m na-ahụ gị ụtọ ihu. Na mgbe ọ bụla m na-eche banyere anyị, m nwere ike ọ gaghị enyere ma na-eche ọdịnaya. M nnọọ ụtọ na anyị nwere onye ọ bụla ọzọ, n'ihi na mma ma ọ bụ nke ka njọ.
Ezigbo hubby, Anyị na-eme ihe dị egwu di na nwunye ị maara, m wee ghara nwere ọtụtụ mmegharị na-egosi, ma, m hụrụ n'anya n'ezie unu site n'obi m, Ọ dịghị onye nwere ike mgbe-eme ka anyị iche, na ịhụnanya unu ibu!
Daalụ maka guzo ọtọ n'ihi na m na-akwado m, ọbụna mgbe ụwa dum bụ megide m. Ọbụna mgbe a afọ, m nwere ike ji nganga na-asị, 'My nwa di, ị bụ m dike'. A hụrụ m gị n'anya..
Daalụ maka ka m ụgbọala ọkacha mmasị gị ụgbọ ala, n'ihi na egosipụta m mbọ na maka n'imeso m dị ka a Princess. Ma ọtụtụ n'ime ihe niile, na-ekele gị maka ịlụ m na-ahụ n'anya m maka onye m.
Chineke mere ka m ghọtara otú gọziri agọzi m. N'ihi na O nyere m a magburu onwe onye dị ka di m hụrụ m gị n'anya nke ukwuu.
Achọghị m ịma otú ike ịbụ ọnụ bụ, ihe ọ bụla dị njọ karịa ịbụ iche.
M ga-atụ uche gị mgbe ị na-arahụ na ga-echere ka i nweta azụ.
Good Morning Ịhụnanya Ozi
Ụtụtụ ọma Sunshine. M na-eche echiche nke gị na chọrọ ịgwa gị na m hụrụ gị n'anya. Kwa ụbọchị ga-adị ka mara mma dị ka oge a ma ọ bụrụ na ị bụ m.
Hi mara mma! M na-atụ ị ga-esi nke a mgbe ị na-eteta, m dị nnọọ chọrọ ka ị mara ahụrụ m gị n'anya nke ukwuu na m ga-ekwe ka ị na-aga. Nwere a ụtụtụ ọma nwa ọhụrụ!
M na-eche echiche nke unu na-achọ gị a oké ụbọchị m chọrọ ihe kasị mma n'ihi na ị na olileanya ihe na-aga ụzọ gị.
Tupu ị amalite ụbọchị gị, m chọrọ ka ị ọchị n'ụzọ nile Ịnata hugs na nsutu si m ka m na-ekele unu, ụtụtụ ọma nwa!
M tetara n'ụtụtụ a echiche nke ọnụ ọchị na-achị ọchị na obi ụtọ nile ahụ anyị nwetara, ihe niile m chọrọ ikwu bụ m gị n'anya nke ukwuu. Good Morning ụtọ obi!
Ụtụtụ ọma anwụ. Ọ bụ a ika ụbọchị ọhụrụ. Ihe niile bụ kpamkpam dị iche iche karịa ihe ọ bụ ụnyaahụ, ma e wezụga otu ihe: ịhụnanya m maka gị.
Ị nwere ike ndụ na-enweghị onye na-ekwu "ị bụ nke m", ma na-enweghị onye na-ekwu, "m nke gị."
Ọ bụrụ na U ihichapụ ozi a WTF bcoz ị hụrụ m n'anya. Ọ bụrụ na ị na-azọpụta ya WTF bcoz ị chọrọ m .. & ma ọ bụrụ na ị na ileghara ya anya WTF bcoz ị na-atụ uche m.
Ị ga-abụ ezigbo agba ọsọ n'ihi na ị na-mgbe na-agba ọsọ dị m n'obi, ị ga-abụ ezigbo ohi n'ihi na i zuru obi m, m na-mgbe a ọjọọ shooter n'ihi na m atụ uche gị mgbe niile.
ỊHỤNANYA .. L = Lake nke sorrows .. O = Ocean nke Anya mmiri .. V = Valley nke Ọnwụ .. E = Ọgwụgwụ nke ndụ ....
Na-enye paswọọdụ nke anyị ịhụnanya na ọbụbụenyi onye ọ bụla, N'ihi na ọ bụrụ na ga-asị na nke a paswọọdụ "M hụrụ n'anya U" Ọ pụtara na ọ ga-anataghị ikike ị n'ebe m na ị ga-si aka m
Ọ bụrụ na ị na-ahụ a égbè kpakpando, mechie anya gi na-eme ka a chọrọ. Ọ na-arụ ọrụ n'ihi m, m chọrọ n'ihi na ị!
M rịọrọ Chineke ka a rose & o nyere m a n'ogige. M na-arịọ Chineke maka otu ntapụ mmiri & O nyere m otu oké osimiri. M jụrụ Chineke 4 otu mmụọ ozi & o nyere m gị!
Nwa, ma ọ bụrụ na ị bụ nke abụọ kasị mma girl m, mgbe ahụ, onye bụ kasị mma? Azịza ya bụ dịghị onye, ​​n'ihi na ị ga na-abụ ihe kasị mma girl maka m.
Ọ bụrụ na ịhụnanya bụ ọrịa mgbe ahụ dị m arịa ọrịa. Ma m na-agaghị achọ nkà mmụta ọgwụ na ga iri ọ bụla Erere.
Ịhụnanya dị ka a ụkwara, ọ na-apụghị-ezo.
Ịhụnanya Ozi maka enyi nwoke
Ị na-eme m ụwa dum na-aga gburugburu. Ị na-eme m ụwa dum guzo. Ị na-eme m ndụ bara uru ndụ. Ị na-eme m onye m! A hụrụ m gị n'anya.
Otú m chọrọ na m pụrụ iji ndụ m nile n'okpuru mbara igwe na-ekiri kpakpando na gị? Ị na mbụ na onye ikpeazụ m chọrọ ná ndụ m. Hụrụ gị n'anya hụrụ n'anya.
Ọ bụrụ na m pụrụ iru elu ma jide a kpakpando maka oge ọ bụla ị na-mere m ọchị, dum mgbede na mbara igwe ga-abụ na nkwụ n'aka m.
Achọrọ m ka unu mara na ebe ọ bụ na ụbọchị anyị zutere m na dara ukwuu na ịhụnanya na gị. Ị bụ ndụ m, obi m, mkpụrụ obi m.
Tupu m zutere ị dịghị mgbe m maara ihe ọ dị ka; anya na mmadụ na-amụmụ ọnụ ọchị n'ihi na ọ dịghị ihe mere.
M nnọọ obi ụtọ na ịhụnanya gị. Ị bụ otú ihunanya mmanụ aṅụ, m na-eche otú ihere na ụzọ ị hụrụ m n'anya.
Mee a ebe m na obi gị na ọ bụghị na uche gị maka uche mfe echefu ma obi-echeta mgbe nile. A hụrụ m gị n'anya.
Lisen m, mister. Ị na m naiti enwu agha. Echefula ya.
Oge ọ bụla m na-ahụ gị, m gị n'anya karịa karịa tupu.
Mgbe ụfọdụ, m na-apụghị ịhụ onwe m mgbe m na gị. Enwere m naanị ike dị nnọọ ịhụ gị.
Olee otú Naghachi furu efu Ịhụnanya Ozi si iPhone na gam akporo igwe
Ọ bụrụ na ị na-ahụ na ozi ederede, imessages, ma ọ bụ WhatsApp chat akụkọ ihe mere eme na ekwentị gị na-efu, ma ọ bụ na ị na-ehichapụ ha mmadụ na mberede, i nwere ike ịgbalị Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone data mgbake) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone for Android (Android data mgbake) (ibudata ya ebe a) naghachi ha kọmputa gị dị ka printable faịlụ. Wondershare Dr.Fone Usoro bụ World mbụ nso nke ọkachamara software naghachi faịlụ na data si igwe na mbadamba.
Ị nwere ike ibudata Wondershare Dr.Fone maka iOS free ikpe mbipute ịhụ ma ọ nwere ike ịhụ gị ehichapụ ozi ederede ma ọ bụ
Olee otú Naghachi ozi ederede site na iPhone
Olee otú Zọpụta ozi ederede site na iPhone
> Resource> iPhone> Ịhụnanya Ozi maka enyi nwanyị, enyi nwoke, nwunye ya, na Di